Manohana Blaogy Afrikana Ny BBC · Global Voices teny Malagasy
Manohana Blaogy Afrikana Ny BBC
Voadika ny 12 Septambra 2018 12:21 GMT
Hatry ny ela ny BBC no efa mamporisika an'ireo mpamaky sy ireo mpihaino ny tolotra omeny an'i Afrika mba hiresaka ny fomba fijerin-dry zareo mikasika io tanibe io, amin'ny alalan'ny famakiana ireo lahatsoratra sahala amin'ny “”Nahoana no tiako i Afrika”, ka ao no anasàny ireo Afrikana sy ireo mpitia an'i Afrika mba hizara ireo fijery miabo ananan-dry zareo momba io tanibe io. Tsy ela akory izay, nandroso dingana iray izy ireo ary ankehitriny mampiseho ampahany iray vaovao manankarena, “Ny Fiainana ao Afrika”, izay manangona ireo votoaty rehetra nafantok'izy ireo tamin'i Afrika, ary koa kazarana votoaty midadasika be ety anaty aterineto, anisan'izany ireo famintinana mikasika ny firenena tsirairay avy ao amin'ny tanibe, sarintany iray mahafinaritra mba hampianarana an'ireo ankizy momba an'i Afrika, angona iray ahitana an'ireo toeram-pisakafoanana afrikana ao Angletera sy ireo foiben-toeran'ny onjampeo miresaka an'i Afrika, ireo mpivarotra kapila misy rakikira, sy ny sisa.
(Tsy mety mandeha ny ahy ny Africa Quiz-n'ny BBC) – nihitsoka ilay izy taorian'ny fanontaniana fahatelo – nefa raha toa ianao mahatsiaro ho tsy maintsy hitsapa ny fahafantaranao an'i Afrika, mamelà ahy hanafatra anao hijery ny lalao Sarintanin'i Afrika an'ny Schoolnet Namibie, indrindra indrindra rehefa eo amin'ny ambaratonga tena sarotra indrindra …)
Saingy ho an'ireo mpankafy ‘bridgeblogs’, ny ampahany tena mahaliana dia ny “Afrika-ko”, angona iray misy ireo “diary” narindran'ireo mpifandray amin'ny BBC sy ireo olona nifaneraseran-dry zareo teny amin'ny làlana nodiaviny. Ny ankamaroany dia tsy nanana afa-tsy lahatsoratra iray na roa monja, nefa tonga ho sary manankarena momba ny fiainana manokana teo amin'ilay tanibe. Ny fahitan'i Franck Otete mikasika ny fianarana ho mpitsabo ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo dia mampahatsiahy antsika ny maha-zava-dehibe ny aterineto amin'ny fampianarana eo amin'ny tanibe, satria ny ankamaroan'ireo leson'i Franck dia rantovina avy lavitra avy any Frantsa. Miverina ao Ghanà i Ekow Eshun, tanin'ireo ray amandreniny, na dia tany Londra aza izy no lehibe ary nanjary mpahay kanto – ny diany niverina an-tanindrazana dia nanjary fehezam-panontaniana iray saro-bahàna mikasika ny tena fiaviany.
Saingy ny ny marina amin'ireo blaogy dia tsatsara kokoa izy ireny rehefa manam-potoana be ianao – ary lahatsoratra betsaka – mba hahafantarana bebe kokoa mikasika ilay mpanoratra. Vao haingana, nanjary nankafy ny blaogin'i Eseme Udoekong aho – Mpampianatra matematika sady tantsaha madinika ao Ikpe Udok izy, ao Nizeria, izay toa nahazo fahasoavana manokana ho mpampianatra sy fankafizana ny politikam-bohitra. Namaky an'i Lilian Indombera ihany koa aho, mpanabe sady mpiantsehatra iray izay mizara ny fotoanany ho an'i Nairobia tany niaviany sy ireo tobin'ireo Borondey mpialokaloka ao Tanzania . Manana fijery midadasika be izy mikasika ny sasany amin'ireo antsipirihany maroloko ao Kenia, anisan'izany ireo matatus (minivans) voahaingo mahatalanjona izay ampiasaina ho fitanterambahoaka ho an'ny ankamaroan'ireo Keniana.
Ary manome fijery tsy mbola nosainiko velively i Edward Chiwale – ny fijery ny fiainana amin'ny maha mpitandro filaminana ao Mufulira, ao Zambia, tao amin'ny blaogy mitondra ny lohateny hoe “Raharahanan'ny Polisy”. Mendrika ho tadidiana ny hafany voalohany – lesona iray mikasika ny fomba fitondràna marary iray ho any amin'ny hopitaly rehefa tsy afaka manolotra fiara mpitondra marary ilay hopitaly.
Tokony ho tamin'ny 10 alina, nahita lehilahy iray tao amin'ny toeram-pisotroana aho, lehilahy iray tena goavambe, tonga nanatona tao amin'ny biraonay nibata lehilahy iray hafa maratra. Notantarainy ny ratran'ilay lehilahy. Nandroso nanatona ny toerana fandraisana aho, nojereko ilay lehilahy maratra, oh! Nisafoaka aho raha vao nahita ireo tsinainy nivoaka avy tao an-kibony.
Nanomboka namoaka tatitra ara-pahasalamana aho, nefa ilay lehilahy efa ambavahaonan'ny fahafatesana. Tsy nisy fiara mihitsy tao amin'ny birao tamin'io fotoana io, noho izany tsy nisy safidy hafa ho ahy afa-tsy ny nandray ny AK47 Riffle-ko ary nijoro teo an-dalambe.
Vetivety dia nisy fiara tonga, nefa efa nirotsaka ny alina, tsy nety nijanona ilay mpamily. Nanao tifi-danitra aho mba hampitahorana azy ary dia nijanona izy. Nentina tany amin'ny hopitaly izay nitsaboana azy ilay marary ary velona.
Izaho sy ireo namako tao amin'ny AllAfrica dia samy nanaraka an'ireo blaogy afrikana ampolony teo amin'ny BlogAfrica nandritra iny taona lasa iny.. nefa amin'ny maha mpanangom-baovao, voafetra izahay ho amin'ny fandrakofana an'ireo blaogy izay foronin'ireo olona sy raiketiny amin'ny fomba organika. Lasa lavitra foana BBC amin'ny fikarohana an'ireo olona manana tantara mahaliana ho tantaraina, amin'ny fampitondrana azy ireo fitaovana fakana sary nomerika sy amin'ny famporisihana azy ireo hanohy hanoratra.Hita ho toy ny traikefa mahomby tsara izy io hatramin'izao, izay, hinoako fa, hivelatra mba hahafahan'ny Global Voices manasongadina mismisy kokoa amin'ireny bilaogy afrikàna tonga lafatra ireny.